Cherry Orchard | February 2020
Ugu Weyn Ee Cherry Orchard
Cherry Tatill oo madow
Malaha, qaar ka mid ah jecel ee miraha quruxda koonfureed ee cajiibka ah waxay og yihiin in ay jiraan wax ka badan dhowr kun oo nooc oo jeeriga macaan ee dabiiciga ah. Intaa waxaa dheer, sanad kasta waxaa la kordhiyaa tiradaas. Sidaa darteed, waxaad leedahay fursad kasta oo ay ku doortaan sida saxda ah ee cherry macaan ee si fiican u kori doona gobolkaaga, iyada oo la tixgelinayo dhammaan cimilada iyo cimilada ciidda.
Waxaan ku baranaynaa darajo cherry macaan "Valery Chkalov"
Anigu ma yaqaanno adiga, laakiin waxaan haystaa oo kaliya hal mooday oo ku saabsan berry xagaaga casiir leh, waxaa jira rabitaan badan oo lagu tijaabiyo. Waxaa jira noocyo badan oo kala duwan oo ah cherry macaan: laga bilaabo casaan cirro leh? in ay berrito iyo huruud ah. Cherry, oo ah marti ah mawduuceena maanta, waxaa loo soo gaabiyaa Valeria sida dadka dhexdooda ah.
Cherry Sweet Iput
Ka hadlida noocyada ugu fiican ee jeeriga, waxaa lagama maarmaan ah in la soo waco kala duwanaanta kala duwan. Daryeelka saxda ah ayaa la damaanadqaadayaa inuu na siiyo miro aad udageysan, midho fiican leh. Waxaan bixinnaa akhristayaasha xiisaha leh si ay u tixgeliyaan noocyada kala duwan si faahfaahsan Kala duwanaanta Cherry macaan oo macnaheedu yahay jiilaalka-adag, noocyo skoroplodny leh celcelis dhalid iyo Bisaylkiisa hore hore.
Cherry macaan "Regina"
Cawska Cherry ku dhacaa badanaa wuxuu dhacaa qeybta dambe ee Juun. Sababtoo ah nolol maalmeedka gaaban ee berry, bilaha dambe ma aha suurtogal in la cuno miraha dhadhan fiican leh. Xaaladdan oo kale, fadlan doonaa nooc kasta oo jeeriga ah "Regina", kaas oo iska leh noocyo Bisaylkiisa goor dambe. Waxaan soo bandhigi doonaa dhammaan siraha kala duwan ee cajiibka ah iyo si aad u ogaato shuruucda beerto.
Beeraley kasta oo doonaya inuu beerta beerta oo keliya noocyada ugu fiican ee geedaha beerta si ay ugu raaxaystaan ​​dalagyo badan oo dhadhan fiican leh. Si kastaba ha noqotee, dhadhanka iyo midabka dhamaantoodba way kala duwan yihiin. Sidaa darteed, si loo ballaariyo aad aqoonta jeeriga, waxaan ku ogaan doonaa kala duwan oo kala duwan ee geed this beerta - "Bullish Heart".
"Diver Black" - qaababka ugu muhiimsan ee kala duwan, iyo sidoo kale talooyin ku saabsan daryeelka iyo beeritaanka
Kala duwanaantan ayaa leh magacyo badan. Waxaad la kulmi kartaa isaga oo ah "Koonfureed", "South Coast Red", iyo "Bigarro Diber" (sharaf leh ninkii beerta ka shaqaynayay). Laakiin weli, caanka ah ee Cherries "Dibra Black" si aad u ballaadhan yahay waa mudnaanta of midhaha ugu quruxda badan oo delicious. Waanu ku ogaan doonaa astaamaha, shuruucda beerashada iyo daryeelka.
Cherry macaan "Bryansk Pink"
Ka mid ah noocyo badan oo cherry macaan "Bryansk Pink" degaan meel gaar ah. Kala duwanaantani ma aysan dhicin waqti hore ee diiwaanka Gobolka ee Russia, laakiin thanks to dhadhanka midhaha iyo muuqaalkooda, waxaa laga helaa goobo badan oo bannaanka u hiwaayadda maanta. Waxaan kuu sheegi doonnaa wax dheeraad ah oo ku saabsan qaababka iyo sida loo abuuro iyo daryeelka geed.
Gorfaha kuma faani karaan cabbirka weyn ee midhihiisa, sida miro kale oo dhagax ah. Si kastaba ha ahaatee, waxaa ka mid ah noocyo macaan noocyo kala duwan, taas oo isbarbardhigga faahfaahin ah waa ku dhowaad. Waxaa ka mid ah kuwan, waxaa haboon in la xusuusto kala duwan ee "Krupnoplodnaya" cherry macaan, magaca kaas oo ku hadla nafteeda.
Cherry macaan "Revna"
Tani noocyo kala duwan oo ah jeeriga macaan waa mid aad u la mid ah waalidkiisa - cherry macaan "Pink Bryansk", laakiin weli waxaa jira khilaafyo badan. Iyo haddii aad go'aansato in ay ku beeraan a cherry macaan on sawirkaaga, waa mid aad u muhiim ah in la ogaado dhammaan faahfaahinta ku saabsan miraha, geedka, caleemaha, faa'iido iyo faa'iido ee kala duwan. Sidaa darteed, tixgelin si faahfaahsan kala duwan ee "Revna" iyo wax ka bartaan sifooyinka beeritaanka geedo iyo daryeelka geedaha.
https://lezgka.ru so.lezgka.ru © Cherry Orchard 2020